I-imeyili Yokumaketha nge-imeyili | Martech Zone
Ukuthengisa nge-imeyili kanye nemikhiqizo ezishintshayo yokuthengisa, izixazululo, amathuluzi, amasevisi, amasu, nemikhuba engcono kakhulu yamabhizinisi evela kubabhali be Martech Zone.
Ubumfihlo: Khulisa Ukuthengiswa Kwakho Kwesitolo Esiku-inthanethi Ngaleli Platform Ephelele Yokumaketha Kwe-Ecommerce
ULwesibili, May 10, 2022 ULwesibili, May 10, 2022 Douglas Karr
Ukuba nenkundla yokumaketha eyenziwe kahle futhi ezenzakalelayo kuyisici esibalulekile sazo zonke iziza ze-e-commerce. Kunezinyathelo eziyisi-6 ezibalulekile okufanele zisetshenziswe yinoma yiliphi isu lokumaketha nge-e-commerce maqondana nemiyalezo: Khulisa Uhlu Lwakho - Ukwengeza isaphulelo esamukelekayo, ama-spin-to-win, ama-fly-out, kanye nemikhankaso yenhloso yokuphuma ukuze ukhulise uhlu lwakho futhi unikeze okunikezwayo okuphoqelelayo kubalulekile ekukhuliseni abathintwayo bakho. Imikhankaso - Ukuthumela ama-imeyili okwamukela, izincwadi zezindaba eziqhubekayo, izipesheli zesizini, nokusakaza imibhalo ukukhuthaza okunikezwayo kanye
Hunter: Ungalithola Kanjani Ikheli Le-imeyili Lokuxhumana le-B2B Ngemizuzwana
ULwesithathu, April 27, 2022 ULwesithathu, April 27, 2022 Douglas Karr
Kunezikhathi lapho udinga ngempela ukuthola ikheli le-imeyili ukuze uxhumane nozakwenu ongenalo ebhukwini lakho lamakheli. Ngihlala ngimangele, isibonelo, bangaki abantu abane-akhawunti ye-LinkedIn ebhaliswe ekhelini le-imeyili lomuntu siqu. Sixhumekile, ngakho ngiyababheka, ngibathumele i-imeyili… bese ngingatholi mpendulo. Ngizodlula kuzo zonke izixhumanisi zemiyalezo eqondile kuzo zonke izingosi zokuxhumana kanye nempendulo
I-Vendasta: Kala I-Ejensi Yakho Yokumaketha Yedijithali Ngale Platform Yelebula Emhlophe Yokuphela Kuya-Ekupheleni
ULwesine, April 14, 2022 ULwesine, April 14, 2022 Douglas Karr
Noma ngabe uyi-ejensi yokuqala noma i-ejensi yedijithali evuthiwe, ukukala i-ejensi yakho kungaba inselele impela. Kunezindlela ezimbalwa kuphela zokukala i-ejensi yedijithali: Thola Amakhasimende Amasha - Kufanele utshale imali ekuthengisweni nasekumaketheni ukuze ufinyelele amathemba amasha, futhi uqashe ithalente elidingekayo ukuze ufeze lokho kuhlanganyela. Nikeza Ngemikhiqizo Emisha Namasevisi - Udinga ukwandisa iminikelo yakho ukuze uhehe amakhasimende amasha noma wandise